नेपाल इन्स्योरेन्स | गृहपृष्ठ
Home कम्पनि विश्लेषण नेपाल इन्स्योरेन्स
कम्पनि विश्लेषण, लगानी 40 views
नेपालको पहिलो निर्जीवन बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आव २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासमा रू. ४ करोड २७ लाख नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यो १३ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको आम्दानी २४ प्रतिशत बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको चुक्तापूँजी ५ प्रतिशत बढेर रू. ३० करोड १९ लाख पुगेको छ । कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. १६ करोड ६७ लाख छुट्याएको छ भने बीमाकोषमा रू. १५ करोड ७१ लाख जम्मा भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ३८ करोड १९ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पु¥याउन निर्देशन दिएसँगै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट फागुन २९ गते स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीले वैशाख ५ देखि १ बराबर १ अनुपातमा ३० लाख १९ हजार ८ सय ८६ दशमलव १० कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ । विक्री प्रबन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड छ । यो हकप्रदमा आवेदन दिन चैत २२ गतेसम्म शेयर किनेको हुनुपर्नेछ । सो हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार पुग्नेछ । साथै, कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनपछि पनि पूँजी अपुग भएकाले रू. ४ दशमलव ५२३ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने र ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । शतप्रतिशत हकप्रद शेयर र बोनस शेयर वितरणपछि कायम हुने चुक्तापूँजीको ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको हो । सो हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपश्चात् कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १ करोड ९१ लाख ३ हजार ८ सय ६३ दशमलव २० पुग्नेछ ।
कम्पनीले रू. ७ करोड ९० लाख आम्दानी गर्दा रू. ३ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । खुद चालू सम्पत्ति रू. २८ करोड ५७ लाख छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशत बढी हो ।
दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ३८ करोड १९ लाख कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । जारी रहेको बीमालेखको सङ्ख्या ३० हजार ५९ छ ।
कम्पनीले ७ जनालाई रू. ११ करोड ९३ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने २ हजार ५८ जनालाई रू. ८४ करोड ५६ लाख भुक्तानी दिन बाँकी दाबी छ । साथै, बीमा बजारको धरातल र जोखीमको विश्लेषण, विविधीकरण, गुणस्तरीय व्यवसायको अभिवृद्धि गरी छिटोछरितो रूपमा ग्राहकलाई सेवा प्रदान तथा शाखा विस्तारको नीतिलाई निरन्तरता दिने रणनीति लिएको छ । यसबाट बीमितहरूलाई गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रदान गर्न कम्पनी सक्षम हुनेछ ।
दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. १३ दशमलव ५२, मूल्य आम्दानी अनुपात रू. १ सय ५ दशमलव ७७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ९७ दशमलव ८४ छ । बिहीवार शेयरमूल्य नेटवर्थको साढे ४ गुणा छ ।
ल खरीद चाप :कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप ५ गुणा बढी छ । सो अवधिसम्म २१ हजार ३ सय ११ कित्ता शेयर खरीद र ४ हजार २३ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
मैनबत्ती बिश्लेषण : कम्पनीको ५५ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा लामो पुच्छर भएको सेतो मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो मैनबत्तीले कम्पनीको शेयर मूल्य आगामी दिन बढ्ने सङ्ेकत देखाउँछ ।
आरएसआई : कम्पनीको ५५ दिनको कारोबारमा न्यूट्रल जोन (४१ दशमलव ८८ स्केल)मा छ । यसले खरीदविक्री चाप सन्तुलनामा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको ५५ दिनको कारोबार २७ दशमलव ३१ विन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको देखाएको छ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ५५ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने मूल्यरेखा एकआपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाको बीचमा छ । हालको मूल्य रू. ९ सय ५ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा रू. १ हजार ६० मा प्रतिरोध पाउछ भने सस्तिएमा रू. ८ सय ३० मा टेवा पाउन सक्छ ।